Amapulazi omoya amakhulu kunawo wonke emhlabeni (onshore and offshore) | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Amapulazi omoya amakhulu kunawo wonke emhlabeni
Amapulazi omoya ayiqembu lama-turbine omoya athi shintsha amandla omoya abe ngamandla kagesiZingaba zasemhlabeni noma zasolwandle.
Amapulazi omoya ayi-8 kwayi-10 amakhulu kunawo wonke emhlabeni atholakala e-United States, kanti amahlanu awo aseTexas. Futhi, phakathi ku-TOP 10 kunepulazi elilodwa kuphela elisogwini lolwandle, njengabo bonke abanye abasemhlabeni. Sizozihlukanisa ngokwamandla azo afakiwe:
1 1. Isikhungo Sikagesi Se-Alta:
2 2. Abelusi Flat Wind Ipulazi:
3 3. IRoscoe Wind Farm:
4 Isikhungo Sikagesi Samahhashi Esingenalutho:
5 5. ICapricorn Ridge Wind Farm:
6 6. ILondon Array Offshore Wind Farm:
7 7. Ipulazi Lomoya laseFantanele-Cogealac:
8 8. IFowler Ridge Wind Farm:
9 9. I-Sweetwater Wind Farm:
10 10. IBuffalo Gap Wind Farm:
1. Isikhungo Sikagesi Se-Alta:
El Isikhungo se-Alta Wind Energy (I-AWEC, i-Alta Wind Energy Center) eseTehachapi, eCalifornia, e-United States, okwamanje ipulazi lomoya elikhulu kunawo wonke emhlabeni, elinamandla okusebenza we-1.020 MW. Ipulazi lomoya elisogwini lisetshenziswa onjiniyela bakwaTerra-Gen Power, okwamanje abacwile ekwandiseni okusha ukukhulisa amandla epulazi lomoya I-1.550 MW.
2. Abelusi Flat Wind Ipulazi:
Itholakala ngase-Arlington, empumalanga ye-Oregon, e-United States, iyipulazi lomoya lesibili ngobukhulu emhlabeni elinamandla afakiwe I-845 MW.
Kuthuthukiswe ngabanjiniyela beCaithness Energy, lesi sikhungo sihlanganisa ngaphezu kwama-77 km² phakathi kwezifunda zaseGilliam naseMorrow. Iphrojekthi, eyenziwe ngonjiniyela be- ICaithness Energy endaweni engaphezu kwamakhilomitha angama-77 phakathi kwezifunda zaseGilliam naseMorrow, ukwakhiwa kwaqala ngo-2009 ngemali elinganiselwa ku- $ 2000 billion.
Ipaki yakhiwe ngama-turbines angama-338 we-GE2.5XL, ngalinye elinamandla amancane we-2,5 MW.
3. IRoscoe Wind Farm:
El IRoscoe Wind Farm iseduze kwase-Abilene eTexas, e-United States, njengamanje iyipulazi lomoya lesithathu ngobukhulu emhlabeni elinamandla afakiwe we I-781,5 MW, yathuthukiswa ngonjiniyela be-E.ON Climate & Renewables (EC&R). Ukwakhiwa kwayo kwenziwa ngezigaba ezine phakathi kuka-2007 no-2009, okuhlanganisa indawo engama-400 km XNUMX epulazi.
Ngokuqondile, isigaba sokuqala sifake ukwakhiwa kwama-209 Mitsubishi turbines we-1 MW, esigabeni sesibili kwafakwa ama-turbines angama-55 akwa-Siemens angama-2,3 MW, kanti isigaba sesithathu nesesine sahlanganiswa ama-166 GE turbines we-1,5 MW no-197 turbines we-1 MW ngokulandelana. Ingqikithi, Ama-turbine omoya ahlukene angama-627 afakwa ebangeni lamamitha angama-274, eyaqala ukusebenza ndawonye ngokugcwele kusukela ngo-Okthoba 2009.
Isikhungo Sikagesi Samahhashi Esingenalutho:
Le paki itholakala phakathi kukaTylor neNolan County eTexas, e-United States, okwamanje iyipulazi lomoya lesine ngobukhulu emhlabeni elinamandla afakiwe 735,5 MW.
Lezi zikhungo zakhiwe ngezigaba ezine phakathi kuka-2005 no-2006, onjiniyela bakwaBlattner Energy ababhekele ezobunjiniyela, ukuthengwa kwempahla nokwakhiwa (i-EPC) zephrojekthi. Ngokuqondile ezigabeni ezintathu zokuqala zephrojekthi Kufakwe imishini yomoya engu-142 we-1,5 MW ovela ku-GE, imishini yomoya engu-130 ye-2,3 MW evela kwa-Siemens kanye nama-149 omoya omoya we-1,5 MW kusuka GE ngokulandelana.
5. ICapricorn Ridge Wind Farm:
Itholakala phakathi kwezifunda zaseSterling neCoke eTexas, e-United States, okwamanje iyipulazi lomoya elikhulu kunawo wonke emhlabeni elinamandla afakiwe I-662,5 MW, eqhutshwa onjiniyela be-NextEra Energy Resources. Ukwakhiwa kwaso kwakhiwa ngezigaba ezimbili, esokuqala saphothulwa ngo-2007 nesesibili ngo-2008.
Ipulazi lomoya linezinjini zomoya ezingama-342 GE 1,5 MW kanye nama-65 Siemens 2,3 MW omoya, alinganisa ngaphezu kwamamitha angama-79 ukuphakama ukusuka phansi. Ngenxa yalokhu, ipulazi lomoya lingahlangabezana nezidingo zikagesi ze izindlu ezingaphezu kwama-220.000.
6. ILondon Array Offshore Wind Farm:
ILondon Array, ipaki yasolwandle enkulu kunazo zonke emhlabeni enamandla afakiwe we-630 MW, Ifaka ipulazi lomoya lesithupha ngobukhulu emhlabeni. Kuthuthukiswe onjiniyela eDong Energy, E.ON naseMasdar, izakhiwo zayo zitholakala ngaphandle komfula iThames ngaphezu kwamakhilomitha angama-20 ukusuka ogwini lwaseKent nase-Essex.
Yize iyipaki enkulu ekude nolwandle emhlabeni, abagqugquzeli bayo bahlela ukukhulisa amandla ayo kuze kufike ku-870 MW esigabeni sesibili kulindwe ukuvunywa.
7. Ipulazi Lomoya laseFantanele-Cogealac:
El IFulanele-Cogealac Wind Farm etholakala esifundazweni saseDobruja eRomania, iyipulazi lomoya lesikhombisa ngobukhulu emhlabeni elinamandla afakiwe we I-600 MW. Iphrojekthi, eyenziwe ngonjiniyela be-CEZ Group, inwebeka amahektha ayi-1.092 ezweni elivulekile nje amakhilomitha ayi-17 entshonalanga kogu loLwandle Olumnyama.
I-turbine yokuqala yepulazi lomoya yafakwa ngoJuni 2010, okwenza ukuxhumana kugridi ye-turbine yokugcina ngoNovemba 2012, kusukela lapho ipulazi lomoya elisogwini elikhulu kunawo wonke eYurophu. Lezi zikhungo zakhiwe ngama-turbine omoya angu-240 GE 2.5 XL anesisindo esiphakathi sama-rotor wamamitha angama-99 namandla angawodwa we-2,5 MW, ngokuhlangene amele cishe ingxenye eyodwa kwezishumi yokukhiqizwa kwamandla aluhlaza okuphelele eRomania.
8. IFowler Ridge Wind Farm:
Kutholakala eBenton County e-Indiana, e-United States, kunjalo ipulazi lomoya lesishiyagalombili ngobukhulu emhlabeni. Iphrojekthi, eyenziwe ngonjiniyela abavela ku-BP Alternative Energy North America naseDominion Resources, yenziwa ngezigaba ezimbili, kwavumela inani eliphelele elifakiwe I-599,8 MW.
Ukwakhiwa kwepulazi lomoya, elinendawo engaphezu kwamahektha angama-20.000 2008, kwaqala ngonyaka ka-2010, kwagcina kuqala ukusebenza ngo-182. Lezi zikhungo zakhiwa yimishini yomoya engu-82 Vestas V1.65-40MW, imishini yomoya engu-96 Clipper C-2,5 we-133 MW no-1,5 GE XNUMX MW ophephela bomoya. Ngokubambisana, ipulazi lomoya lingakwazi ukuhlangabezana nezidingo ze amandla emakhaya angaphezu kwama-200.000.
9. I-Sweetwater Wind Farm:
El Ipaki iSweetwater, etholakala eNolan County, eTexas, e-United States, njengamanje iyipulazi lomoya lesishiyagalolunye ngobukhulu emhlabeni elinamandla afakiwe we I-585,3 MW, eyakhiwa ngokuhlanganyela ngabanjiniyela beDuke Energy and Infigen Energy.
Yakhiwa ngezigaba ezinhlanu. Esokuqala salokhu saqala ukusebenza kwezentengiso ngo-2003, kanti izigaba ezine ezisele zaqala ukusebenza ngo-2007. Izakhiwo ziqukethe i- inani lama-turbines angama-392, kufaka phakathi ama-25 GE 1,5 MW omoya ophephela, ama-151 GE SLE 1,5 MW omoya, ama-135 Mitsubishi 1.000A 1 MW ephehlwa ugesi kanye nama-81 Siemens 2,3 MW ephehlwa ugesi.
10. IBuffalo Gap Wind Farm:
Itholakala kumakhilomitha angama-30 eningizimu-ntshonalanga ye-Abilene eTexas, e-United States, njengamanje iyi- XNUMX ipulazi lomoya ngobukhulu emhlabeni onamandla afakiwe we I-523,3 MW, ephethwe yinkampani i-AES Wind Generation. Le phrojekthi yenziwa ngezigaba ezintathu, esokuqala saqedwa ngo-2006 kanti esokugcina senziwa ngo-2007 nango-2008.
Isigaba sokuqala sepulazi lomoya sifake ama-Vestas V-67 80 MW ophephela bomoya, ngenkathi izigaba ezilandelayo zihlanganisiwe Imishini ephehla ugesi eyi-155 GE 1,5 MW kanye nama-74 Siemens 2,3 MW ephendulwa ngumoya ophendukayo, ngaleyo ndlela ibe nama-wind turbines angama-296.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Amapulazi omoya amakhulu kunawo wonke emhlabeni
Ukusetshenziswa kwegesi yemvelo kuyenyuka uma kuqhathaniswa no-2016
Idolobha elinamandla kagesi ashibhile eSpain yiMuras